September 2013 - Page 4 of 43 - iftineducation.com
iftineducation.com – Sabrina Rodrigo oo ah gabar weriye ah, ayaa xili ay warbixin u direysay felefeshin ay u shaqeyso eyadoo joogta beerta xayawaanada, waxaa fowdeeyay Daanyeer, kaas oo ka taabtay naaska Midig, Sabrina ayaa qosol la dhacday eyadoo arintu Comady isku bedeshay. Daanyeerkaan oo lagu magacaabo Valababon “Mickey”, ayaa ah mid caana, wuxuuna ka qeybgalay 2012-ki filimka “Rock Of Ages” weriyayaasha…
Mid ka mid ah Shaqaale ka howlgala Idaacadaha Muqdisho oo muddo sagaal bil aan mushaar la siin
iftineducation.com – Qaar ka mid ah shaqaalaha Idaacadda Xurmo ee magaalada Muqdisho oo la hadlay Shabakadda Qaranside,ayaa sheegaya in muddo sagaal bil aan mushaar la siin isla markaana lagu wargaliyay in Idaacadda la xiray oo la joojiyay shaqadii. Wariyaashan ayaa sheegay in muddo sagaal bil ah aan la siin mushaarkii ay xuquuqda u lahaayeen, isla markaana lagu wargaliyay in howshii Idaacadda…
DAAWO: Sheekh Umal oo Si Adag Uga Hadlay Weerarkii Westgate ee Nairobi
iftineducation.com – Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid culimada Somaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii todobaadkii hore lagu qaaday Suuq ganacsi oo ku yaallay magaalada Nairobi. Sheekh Umal oo dadweyne farabadan kula hadlayey Masjidka Hidaaya ayaa waxa salaadii khudbada shalay Jimcihii waxa uu uga waramay diinta islamka iyo waxay ka qabto weerarada kii westgate oo kale lagu qaaday. Waxa…
Daawo: Qaabkii Ay u Baxsadeen Raggii Weeraray Xarunta Westgate ee Magaalada Nairobi
iftineducation.com – Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay xireen muwaadin Turki ah kaasi oo la sheegay inuu qolal kasii kireeyay kooxihii weerarka ku qaaday dhismaha Westgate Mall ee dalka Kenya. Waxaa jiri shaki dowlada Kenya ay qabto kaasi oo ah in kooxaha weerarka qaaday inay ku baxsadeen tubo dhulka hoostiisa la geliyay oo ku dhextiilay dhismaha Westgate Mall. Halkaan Hoose Ka…
Muqdisho oo Caawa Dagaallo laga seexan la’yahay iyo Shabaab oo gudaha usoo galay..
iftineducation.com – Qeybo kamid ah degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa waxaa laga maqlay daryanka rasaas xoogan iyo dagaalo udhaxeeya Ciidamada DF Soomaaliya iyo Kooxo la rumaysan yahay inay Shabaab yihiin. Dagaaladan ayaa waxaa ay ka dhaceen degmooyinka Hurwaa iyo Yaaqshiid, waxaana dad goob joogayaal ah ay sheegeen inay mar qura kusoo baraarugeen dagaallo toos ah. Xubno katirsan DF Soomaaliya ayaa idaacadaha Muqdisho…
Daawo labo gabdhood oo Somali Canadian ah oo ku dhaawacmay weerarkii Westgate kana warbixnaayo Dhibaatadii ay la kulmeen.
iftineducation.com – Laba gabdhood oo soomalaiyeed Ayaa Ka mid Ahaa Dadkii ka bad badey Weerarkii Westgate Iyadoona Dhawac Fudud Uu ka Soo garey Labadani gabdhood Ee soomalaiyeed. Wareysi ay siyeen TVga Golobal News Ayuu labadani gabdhood Waxa Uu wax badan ka Waydiyey qaabka u Dhawac meen Iyo waxay indahooda Ku Arkeen Xiliga Dhibatada ba ani ka Dhacday xarunta Westagte mall. Waxayna…
Dhibaatooyinka Ka Imaan Kara Galmada Badan
iftineducation.com – Hadii ay galmadu u dhacdo qaabka iyo tiradii loo baahnaa waxa uu qofku ka dhaxlayaa Faa’iidooyin dhorw ah waxaana ka mid ah. -Araga iyo wadnaha ayey wanaajisaa. -Dareemayaasha ayey fududeysaa. -Jirka iyo maskaxda ayey firfircooni u yeeshaa.. -Waxa ay kaalmeysaa qashin saarka kilyaha. -Dhiiga ayey cosbooneysiisaa. Hadii qofku jirkiisa uu ka badiyo inta uu xamili karo galmada dhibaatooyin badan…
Daawo Top Ten-ka Sawirada Ayaan Taleex
aadan21 / September 28, 2013
iftineducation.com – Waa markale iyo barnaamijkii Top 10 oo aan kusoo bandhigno hadba sawirada ugu shidan ee dadka caanka ah. Maanta waxaan halkaan idin kugu haynaa sawirro cajiib ah oo ay soo saartay xidigta caan baxday ee Ayaan Taleex Hoos ka daawo:
Weerarkii Westgate oo weli Dawlada Kenya hadal-heyso & 8 Qof oo weerarkaasi loo soo qabtay
iftineducation.com – Wasiirka arimaha gudaha dalka Kenya Josef ole lenko ayaa sheegay in saraakisha dalka Kenya ay gacanta kusoo dhigeen 8-qof oo lala xiriirinayo weerarkii ay Al-shabab ay ka geesteen magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya todobaadkii tagay,saraakishasi aya suaalo weydiin kadib waxa ay siidayen 3-kamid ah shaqsiyaadkasi ay soo qabteen. Waxa uu shegay wasiirka arimaha gudaha Kenya in shaqsiyaadka gacanta…
Daawo Video : Madama hooyaday Somali ay tahay waa inan Barlamanka Somalia Xubin ka noqdaa (Sual la waydiyey Xasan Sheikh)
aadan21 / September 27, 2013
iftineducation.com – Wiil Abaabihiis Sida La Sheegay uu Yahay Talyaani, Hasa Ahaatee Hooyadiis ay Tahay Soomaali ayaa Dhowaan Ka Yaabsaday Madaxwayne Xasan Sheekh. Wiilka ayaa Madaxwaynaha Waydiiyey Su’aal uu uwaayey Jawaab, Taasi oo ku Aadanayd Marxalada Soomaaliya, Sidoo kalana wuxuu Ka hadlay Arimo Badan oo Jira. Arintaan ayaa waxay Noqotay Mida Ugu Xiisaha Badan ee Soo marta Madaxwaynaha Soomaaliya, Taariikhda Danabana…